Turkish Airline oo dib u bilaabaysa duulimaadyadeedii Soomaaliya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Turkish Airline oo dib u bilaabaysa duulimaadyadeedii Soomaaliya
Sharikadda duulimaadka ee Turkish Airlines ayaa qorshaynaysa inay dib u bilawdo duulimaadyadii ay ku tagi jirtay Afrika, oo ay kujirto magaalada Muqdisho, taasoo bilaaban doonta usbuuca soo socda.
Sharikadda Turkish Airlines ayaa duulimaadkeedii ugu horreeyey ee qaaradda Afirka bilowday bishan July 1deedii, ku bilowday magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Waxaa la filayaa inay duulimaadyada Soomaaliya dib u bilaabi doonto bisha July 22, iyadoo sameynaysa seddex duullimaad usbuucii oo kala ah, Arbacada, Jimcaha iyo Sabtida. Waxay sharikadda duulimaadyadeedii maalinlaha ahaa ee magaalada Muqdisho bilaabidoonta bilowga bisha August.
Sharikadda waxay sidoo kale duulimaad ka bilaabidoontaa magaalooyinka Addis Ababa July 13 (Usbuucii 3 duulimaad), Nairobi July 10 (Usbuucii 3 duulimaad) iyo Johannesburg July 13 (Usbuucii 3 duulimaad).Shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines waxay duulimaadyada caalamiga ah dib u bilaabeen 11-kii Juun.
Duulimaadkii ugu dambeysay ee Turkish Airlines ee tagta Muqdisho waxay ahayd 17-kii Maarso.
Previous articleHa,yada Amnesty International oo dalbatay in si shuruud la’aan ah lagu sii daayo Wariye Abuja
Next articleItoobiya oo qaaday talaabooyin ay uga hortageyso faafinta Banaan baxyada socda